စမလုံးချင်ဘု လုံးလုံးကြီး စိတ်နာ (၄) – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on 17 November 2010 17 November 2010 Categories Reproduction, Travelogue
13 thoughts on “စမလုံးချင်ဘု လုံးလုံးကြီး စိတ်နာ (၄)”
17 November 2010 at 4:47 pm
“၁၉နှစ်သားလောက်ကတည်းက လုပ်လာလိုက်ရတာ အခုဆို ၅၃ နှစ်။ အလုပ် လုပ်ခဲ့ရတဲ့ သက်တမ်းကိုက ၃၄နှစ် ရှိနေပြီ။ တစ်ခါမှ ပိုက်ဆံ အချောင် မရဖူးဘူး။ ဆုသေးလေးတွေတော့ တစ်ခါလား၊ နှစ်ခါလား ပေါက်ဖူးပါတယ်။ သို့သော် ဆုကြီးတော့ တစ်ခါမှ မတစ်ခါဖူးတဲ့အတွက် ထီကို ကျွန်တော် သိပ်စိတ်မဝင်စားဘူး။”
ဒါလေးကို အရမ်း သဘောကျတယ်..။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ထီကို သိပ်စိတ်မ၀င်စားဘူး…။ တစ်နှစ်မှာ တစ်ခါ၊ နှစ်ခါ လောက်တော့ ထိုးဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်..။ ဘာပဲပြောပြော ထီးထိုးပြီးရင်တော့…. ရမယ့် ဆုတွေနဲ့ စိတ်ကူယဉ်လို့တော့ အကောင်းသား… 🙂
17 November 2010 at 5:27 pm
ဆရာ Clarke quay မှာ Apostrophe s ပါလို့လား ဆရာ။ မတွေ့မိဘူးလားလို့
အခုလို ထောက်ပြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မှန်ပါတယ်။ Clarke quay သာ အမှန်ဖြစ်တဲ့အတွက် ချက်ချင်း ပြင်လိုက်ပါပြီ။
17 November 2010 at 5:28 pm
အပြာရောင်စာသားက ဘာလို့ ကျန်ခဲ့ ပါလိမ့်။ ဒါနဲ့ သို့ပေမဲ့က ဒီလို“မဲ့” ဟုတ်….။
17 November 2010 at 5:41 pm
ဒါလည်း မှန်ပါတယ်။ သတ်ပုံကျမ်းနဲ့ အဘိဓာန်မှာ အဲလိုပဲ မဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်က အဲဒါတစ်ခုတော့ မမဲ့နိုင်ဘူးဗျာ။ မယ့်ပဲ မယ့်ချင်တဲ့ ရောဂါရှိတယ်။ အကြောင်းရင်းကို မေးရင် အဖြေ မရှိပါဘူး။ အူကြောင်ကြောင် ဖြေရရင်တော့ ပြုံးချင်လို့ မမဲ့တာပဲလို့ ဖြေရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကိုတော့ ပြုံးချင်လွန်းလို့ မပြင်ဘဲ ထားလိုက်ပါရစေနော်။ 🙂
“ဒီလိုဆိုလည်း မယ့်ပေါ့ဆရာရယ် (ပြုံးမယ့်မယ့်ဖြင့် ရေးသွားပါသည်)” လို့ ထပ်မရေးတော့ပါဘူး ဆရာ။ 😛
18 November 2010 at 1:08 am
အကိုပြောတဲ့ ၇၁၁ သာ seven eleven(711) ဆိုရင် သူက အမေရိကမှာ အခြေစိုက်တဲ့ franchise ပေးတဲ့ convenient chains ပါခင်ဗျာ.singapore တို့ Japan, Thai တို့မှာရှိတဲ့ local company တခုက Franchise fees ပေးပြီး ချုပ်ထားတာပါ..
အမေရိကမှာရှိတဲ့ Asian တွေတော်တော်များများ ဝယ်ပြီးဖွင့်တဲ့ chain တခုထဲမှာပါပါတယ်.ဥပမာ subway, MacDonald နဲ့ Burger king တို့လိုပါပဲ..သူတို့ရဲ့Franchisee တွေကို အကျိုးအမြတ်ဝေခွဲမှု့ကတော့ တခုနဲ့တခုမတူပါဘူး..ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု့ကတော့ US$50000 ကနေ US$ 2millions လောက်ထိရှိပါတယ်..နေရာနဲ့ ရောင်းအားပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့ခင်မျာ.
နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ Business တခုစတင် ထောင်ချင်တဲ့ သူတွေအဖို့ ကိုယ့် new business ထက် risks နည်းနည်းယူချင်သူများအတွက် အဆင်ပြေတဲ့ business model တခုပါ..
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် Franchise ဆိုင်တခုဖွင့်ခဲ့ဖူးလို့ အတွေ့အကြုံဝေမျှတဲ့သဘောပါခင်ဗျာ.
18 November 2010 at 1:32 am
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က wikipedia ကို ကြည့်ပြီး ရေးလိုက်တာပါ။
7-Eleven is part of an international chain of convenience stores, operating under Seven-Eleven Japan Co. Ltd, which in turn is owned by Seven & I Holdings Co. of Japan. လို့ ရေးထားတာကိုး ခင်ဗျ။
http://en.wikipedia.org/wiki/7-Eleven မှာ အဲလို တွေ့ရပါတယ်။ သူ့သမိုင်းအရ အမေရိကန်က စတင်ခဲ့တာ မှန်ပေမယ့်လည်း လက်ရှိအချိန်မှာ ဂျပန်ပိုင် ကုမ္ပဏီလက်အောက်ခံပဲလို့ Wiki က အခုလို ဆိုပါတယ်။
Wiki က ယုံကြည်ထိုက်တဲ့ အရင်းအမြစ် ဖြစ်ရဲ့လားတော့ မသိဘူးခင်ဗျ။ သို့သော် ကိုရွှေဂျပန်တို့ကတော့ နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေးမှာ ဆင်ဖြစ်နေတာ အင်မတန်မှ သေချာနေတာမို့ ကျွန်တော်လည်း ရဲရဲတင်းတင်း ရေးလိုက်တာပါ။ အမေရိကန်တွေ တန်ခိုးထွားခဲ့တဲ့ ကားလုပ်ငန်းကိုတောင်မှ အလဲထိုးနိုင်ခဲ့ကြတာမို့ ကုန်စုံဆိုင် အလုပ်လောက်မှာလည်း အမေရိကန့်စိတ်ကူးကို သူတို့က သိမ်းပိုက်လိုက်တာ ဖြစ်မလားပဲလေ။
ကျွန်တော်က ဂျပန်မှာ အခြေစိုက်တယ်လို့ မရေးခဲ့ပါဘူး။ ဂျပန်ကုမ္ပဏီရဲ့ လက်အောက်ခံလို့သာ ရေးခဲ့တာပါ ဆရာ Ko ရေ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျား။
18 November 2010 at 7:20 am
ဆရာကသာ 7-Elevသာအဆိုင်တွေကိုအဆင်ပြေတယ်ပြော်တာ ကျမကတော့ တခြားဆိုင်တွေထက်ဈေးပိုများလို့ မဝယ်ဘူး။ ဖုန်းကဒ်တော့မဝယ်ဖူးဘူး။
18 November 2010 at 7:21 am
7- Eleven ဆိုင်က စာလုံးပေါင်းမှားသွားတယ် ဆောရီး အဟီး
19 November 2010 at 1:13 am
ကျွန်တော်တို့က ဧည့်သွားဧည့်လာလေ၊ အဲတော့လည်း လွယ်တာ လုပ်ရတာပေါ့။ convenient store လို့ ခေါ်တော့ အဆင်ပြေတဲ့ ကုန်စုံဆိုင်ပေါ့ဗျာ။ ဈေးသက်သာတဲ့ ကုန်စုံဆိုင်တော့ ဟုတ်မှာ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ အခြေချနေထိုင်သူများ အတွက်ကျတော့လည်း ဒေါ်ခကွေးရေညို ပြောသလို သက်သာတဲ့နေရာကို ဦးစားပေးရမှာပ။ ဖုန်းကတ်ကိုတော့ ကတ်ပေါ် ရေးထားတဲ့ ဈေးနဲ့ပဲ ၀ယ်ရတာပါ။ အပို ထပ်မပေးရပါဘူး။
ဖုန်းကတ်ဝယ်တဲ့အခါ ကတ်ပေါ်ရေးထားတဲ့ ဈေးနဲ့ ၀ယ်လို့ မရတာက ရွှေနိုင်ငံမှာခင်ဗျ။ Top-up card တွေတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ FEC 10, 20, 50 ကတ်တွေမှာ အဲလို ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးရင်းနဲ့ ရောင်းပေးပါတယ်ဆိုတဲ့ ဆိုင်တွေ သွားဝယ်ရင် ဘယ်တော့မှ မရှိဘူး။ အပြင်မှာတော့ အောတိုက်လို့။ ဈေးလည်း ပိုပေးရပါသဗျ။ ၂၀ တန် ကတ်ကို မြန်မာငွေ နှစ်သောင်းခွဲ၊ ၂၆၀၀၀ အထိ ပေါက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ သို့သော် အဲဒီ့ ၁၀ တန်နဲ့ ၂၀ တန်က အခု နိုဝင်ဘာလကုန်ရင် နိဋ္ဌိတံတော့မယ်ဆိုပဲ။
24 November 2010 at 9:48 pm
ဆရာက ကတ်ပေါ်က ဈေးဆိုတော့ စလုံးအကြောင်း ပိုသိအောင် ဖောက်သည်ချလိုက်ဦးမယ်။7eleven မဟုတ်တဲ့ တခြားဆိုင်တွေမှာ ဝယ်ရင် (အထူးသဖြင့် ပန်နီဆူလာက မြန်မာဆိုင်တွေပေါ့ ဆရာရယ်၊ ကုလားဆိုင်တွေ၊ တရုတ်ဆိုင်တွေမှာလည်း ရတတ်ပါတယ်) ကတ်ပေါ်က ဈေးထက် လျော့တယ် ဆရာရဲ့။ တစ်ဆယ်တန်ဆို ရှစ်ကျပ်၊ သုံးဆယ်တန်ဆို နှစ့်ဆယ်ခုနစ်ကျပ် အဲလိုမျိုးတွေနဲ့ ဝယ်နေကျ ဖြစ်နေပြီ။ 🙂
ဒါနဲ့ ဒီမှာတစ်ခါ ထပ်ပြောလိုက်ဦးမယ်ဆရာ။ ပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ။ ဇရာရဲ့ သင်္ကေတ ဆိုပေမဲ့လည်း ဆရာ့စာတွေက နုပျိုတုန်းပါပဲ။ 😀
ဆရာရေ ဆရာရဲ့ ခရုသင်းကို ကြိတ်မှန်ရွက် နဲ့ ကုကြည့်ပါလားဆရာ… သွေးလိမ်း အရည်ညှစ်သောက် ဟင်းချက် အစုံရပါတယ်… ကျမမောင်လေး လက်တတောင်ဆစ်က လူကြီး လက်ဖဝါး ၃ ခုစာ အဖြူကွက်ကြီး ပျောက်သွားတဲ့ ကိုယ်တွေ့ရှိလို့ပါ…
Previous Previous post: Five Different Kinds of People
Next Next post: Trodden Flower by Khin Hnin Yu